“Lama bar-bardhigayo Lionel Messi, balse Sadio Mané waa Cristiano Ronaldo-ha cusub” – Gool FM
(Yurub) 09 Dis 2019. Xiddiga reer Senegal iyo kooxda Liverpool ee Sadio Mané ayaa ku guuleystay inuu helo naaneysta “New Cristiano Ronaldo” waxayna naaneystaan kaga timid macalinkii hore ee xulka qaranka Holland ee Danny Blind oo muujiyay sida uu ula dhacsan yahay qaab ciyaareedka uu sameynayo xiddiga Reds xilli ciyaareedkan.
Sadio Mané ayaa ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan u dhaliyay kooxdiisa Liverpool 13 gool tartamada oo dhan, wuxuu gacan weyn ka geystay in Liverpool ay kali ku noqoto hoggaaminta horyaalka Premier League.
Danny Blind ayaa wuxuu aaminsan yahay in qaab ciyaareedka uu haatan sameynayo Sadio Mané ay suurtogal tahay inuu u qalmo inuu la mid noqdo Cristiano Ronaldo marxaladda soo socota.
Blind ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “Mirror” ee dalka England wuxuu ku sheegay:
“Sadio Mané waa Cristiano Ronaldo ku cusub caalamka kubadda cagta, waa weeraryahan aad u wanaagsan marka dhan kasta laga eego tayadiisa”.
“Wuxuu goolal ku dhalin karaa labada lugood bidix, midig iyo madaxa, sidoo kale wuxuu baasi karaa kubbado cajiib ah, waa midaan la rumeysan Karin”.
“Wuxuu awoodaa inuu sidaas ka sii xoog badnaado, wuxuu la qabsan doonaa kubadda cagta casriga ah, isla markaana wuxuu awoodaa inuu la qabsado xawaaraha ciyaaraha, waxay arrintan u baahan tahay awood badan jir ahaan iyo maskax ahaanba wax walbana wuu haystaa”
“Lama bar-bardhigayo Lionel Messi, laakiin waxaan u arkaa inuu yahay sida Cristiano Ronaldo marka loo fiiriyo qab ciyaareedkiisa fiican”.